China Nkwanye Ball Iburu Manufacturer na Supplier | Lixin
Nzube obi ụtọ amị mejupụtara atọ n'akụkụ: oche washer, aro washer na ígwè obi ụtọ onu. Ọ bụ ụdị nkewa iche. Na washer washer na oche washer nwere ike iche si akụrụngwa nke onu na ígwè obi ụtọ. Ọ nwere ike ibu ibu axial, mana ọ bụghị radial ibu.
Dabere na nrụgide ahụ, enwere ike kewaa bọọlụ na-ebute otu ụzọ na-ebugharị bọl na-ebute ụzọ abụọ.
Ntuziaka na-agbatị otu ụzọ na-enwe washers abụọ nwere agba ọsọ na bọọlụ na-eduzi na onu. Washers nwere ebe obibi dị larịị, ọ bụ ya mere ha ga-eji kwado ka bọọlụ niile nwee ike ịbudata. Nbufe na-ebu ibu axial naanị n'otu ụzọ. Ha enweghị ike iburu agha dị egwu.
Ugboro abụọ na-atụgharị bọl biarin nwere oghere abụọ na bọọlụ n'etiti etiti na-ehicha akwa na akwa ụlọ abụọ nwere ebe obibi dị larịị. Onye na-ekpofu ihe nwere okporo ụzọ n'okporo ụzọ na n'akụkụ ya ma debe ya na akwụkwọ akụkọ ahụ. Nfe na-enwe ike iburu naanị ike axial n'akụkụ abụọ.
Mara:Nke a bụ naanị obere akụkụ nlereanya nọmba nke Taper ala biarin anyị nwere, ọ bụrụ na ị na-ada na-ahụ onye na ị chọrọ, biko kpọtụrụ anyị ozugbo. Daalụ n'ọdịnihu.
A.tube ngwugwu + katọn elu + pallets
Igbe B.single + katọn elu + pallets
C.tube ngwugwu + igbe dị n'etiti + katọn elu + pallets
D. Dika arịrịọ gi si di.
1.A choro ndi ahia choro nke oma site na otutu ihe edere edere ka ha we zoputa ndi ahia.
2.We na-a closea ntị na eserese ndị ahịa, nyefee ha ndị ọrụ aka anyị ma nye azịza ziri ezi.
3.We na-achụ nta maka ọrụ nnyefe kachasị echekwa iji belata ọnụ ahịa ndị ahịa.
4.We na-akọ banyere ọnọdụ nke mmepụta n'oge ọ bụla na ndị ahịa.
5.After-sales ọrụ a pụrụ ịdabere na ndị ahịa 'nzaghachi na-atụle kpọrọ ihe.
A na-enye ndị ahịa anyị ahịa ahịa kachasị ọhụrụ.
Nke gara aga: Igwe anaghị agba nchara Ball
Osote: Agịga ala agba
Angular Kpọtụrụ Ball Ball Iburu Ball
Bọgide Bọọlụ Buru 51103
Bọgide Ball Buru 51212
Inye Ball agba Ball
Ugboro abụọ Ahịrị Cylindrical ala agba, Anọ ahịrị Cylindrical ala agba, Cylindrical ala agba 20x47x14, Cylindrical ala agba 25x52x15, Obere ọla kọpa, Brass Ball Lelee Valve,